Ebee ka ndị na-ere ahịa na-emefu Dollar Mgbasa Ozi Ha? | Martech Zone
Wednesday, October 19, 2016 Tọzdee, Ọktoba 20, 2016 Douglas Karr
O yiri ka ụfọdụ mgbanwe dị egwu na-ewere ọnọdụ n'ihu ụlọ ahịa dịka ọ gbasara mgbasa ozi. Teknụzụ dijitalụ na-enye ohere dị oke egwu nke na - ebute nsonaazụ dị ukwuu - ndị na - ere ahịa na - arịba ama. Agaghị m akọwahie nsonaazụ ndị a dị ka iche na ọ bụ ọdịnala na ahịa dijitalụ. Ọ bụ ihe ọkaibe. Mgbasa ozi na telivishọn, dịka ọmụmaatụ, na-eto n'ike nke ịdakwasị ndị na-ekiri ya dabere na mpaghara, omume, na oge.
Uche arụmọrụ na-emetụta ndị na-ere ahịa ahịa ugbu a. Anyị na-ahụ mmụba kasịnụ na mgbasa ozi n'ịntanetị, ngwa ngwa. Randy Cohen, onyeisi oche nke Nghọta Mgbasa Ozi
Ahụmịhe dijitalụ na-emekwa ka ahụmịhe mkpọsa ahụ dịkwuo elu, dịka ewepụtara na nso nso a InMoment nke 2016 Retail Industry Report. Ikekwe, ụfọdụ mmefu mgbasa ozi kwesịrị ka agbanwere ya na ahụmịhe ndị na-eri ihe n'ịntanetị. Nchoputa gunyere:
Ndị ahịa na-emefu okpukpu abụọ na-echere mgbe onye ọrụ nyere ha aka
Ndị na-eri eri eri Ugboro ugboro 2.2 mgbe ha gara na websaịtị ika ahụ mgbe ha nọ n’ụlọ ahịa
Mmefu ndị ahịa na-abawanye ugboro anọ mgbe ndị na-azụ ahịa na-etinye aka na ndị ọrụ ha na weebụsaịtị nke ika. Ka enyemaka ndị ahịa na-enweta, nke dijitalụ ma ọ bụ nke mmadụ, otú ahụ ka ọ na-adịkwu njikere imefu.
Hụ mbelata na mmefu ịre ahịa email na-eme ka m chee ma ọnụ ahịa ahịa ahịa email adaala ma ọ bụ achịcha nke ọwa abawanyewo, na-eme ka a gbanwee mmefu ego na-emefu site na email gaa na chanel ndị ọzọ chọrọ nlebara anya. Email marketing bụ ntọala nke usoro azụmaahịa ọ bụla ma ọ bụ nke azụmahịa ọ bụla, yabụ enwere m olile anya na ndị na-ere ahịa anaghị ewepụ mgbali email ha.
Otu n'ime ihe ndị ọzọ na-akpali ajụjụ, m na uche, bụ ma a mkpọsa tinyekwa kwesịrị tinye n'ọrụ a ụlọ ahịa ọpụrụiche ụlọ ahịa. Nzaghachi ahụ jọgburu onwe ya. Nke a nwere ike tụọ aka na okwu dị iche, ikike ụlọ ọrụ ịgbaso na teknụzụ na usoro ndị ahịa. Ọtụtụ ụlọ ọrụ amalitela ọkachamara na nnukwu data, mgbasa ozi mmekọrịta, ahụmịhe mkpanaka, omnichannel, na mgbasa ozi dijitalụ nke na-ebute ụzọ ahịa - karịa ụlọ ahịa mkpọsa.
Nke a bụ infographic si AdWeek, Ndị mgbasa ozi na-ere ahịa na-elepụ Anya:
Tags: mgbasa oziAdweekagbasa ozi n'ikukucableretailmkpọsa mkpọsatelivishọn